7 Khoon Maaf (2011) | MM Movie Store
မိနျးမတိုငျးဟာတဈသကျမှာ တဈခါတော့ သူတို့ ယောကျြားတှကေို သတျပဈဖို့ စဉျးစားဖူးတယျ တဲ့ …..ခငျဗြားဟာ အိမျထောငျသညျဆိုရငျ ခငျဗြားရဲ့မိနျးမကို မေးကွညျ့ပါ ။
အနညျးဆုံး တဈကွိမျတော့ ခငျဗြားကို သတျဖို့ နညျးလမျးတဈခုတော့ သူစဉျးစားဖူးလိမျ့မယျတဲ့ …..ကဲ .. ဒါဆို ဘာလို့ ခငျဗြား အခုထိ အသကျရှငျနလေဲ သိလား?
“ကလေး”ကလေးတဈယောကျလောကျ ရလိုကျရငျမိနျးမတှဟော ယောကျြားကို ပိုပွီး သညျးခံလာနိုငျလာတယျတဲ့ … ဒါကွောငျ့ ခငျဗြား အခုခြိနျအထိ အသကျရှငျနတောပေါ့ …..
ဆူဆနျနာ အနျနာမရငျး ဂြိုဟနျနာ ဆိုတဲ့သူဌေးမ တဈယောကျ ယောကျြား ၆ ယောကျထိ ယူခဲ့တယျ အကုနျသကေုနျတယျ ။
တကယျတော့ ဆူဆနျနာဟာသူ့ဘဝသကျတမျး တဈလြှောကျလုံး ထာဝရအခဈြကို ရှာဖှခေဲ့တာပါ ၊ အရမျးအထီးကနျြခဲ့ရပါတယျ ။ သူ မှေးကငျးစအရှယျမှာပဲ သူအမေ ဆုံးပါးသှားခဲ့တယျ ။ ပွီးတော့ သူအရှယျမရောကျခငျမှာဘဲ သူ့အဖေ ထပျဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ ။
သူ့အဖကေ သူအတှကျတော့ အရာရာပါပဲ သူငယျခငျြးလို.. အမလေို.. အဖလေို.. အဈကိုလို ဖွဈနခေဲ့တယျ ။ သူအဖဆေုံးသှားတဲ့နောကျပိုငျးမှာ သူ့အဖလေို ယောကျြားမြိုးကိုတှဖေို့ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ ။တကယျတော့ ဆူဆနျ ဘဝကမကောငျးတဲ့ ယောကျြားတှနေဲ့ပဲ ဆုံဖို့ ကံပါလာတယျ ထငျပါတယျ ။
ဆူဆနျနာမှာ သိပျခဈြတတျတဲ့ နှလုံးသားရှိတယျအဲဒိနှလုံးသားကွောငျ့ပဲ လူ ၆ ယောကျကို သနေမေ့စပေဲ့ ကောငျးကငျဘုံကို စောစောစီးစီး ပို့ပဈလိုကျတယျလေ ….ဆူဆနျရဲ့ အလှက ကွောကျစရာကောငျးတယျဒါပမေယျ့ သူ့ကို အရှိအတိုငျး လကျခံနိုငျမယျ့သူမြိုး ….
သူ့ရဲ့ဒုစရိုကျတှေ သုစရိုကျတှနေဲ့ ဒီကွောကျစရာမကျြနှာကွီးကို လကျခံနိုငျမယျ လူမြိုးကို သူရှေးခယျြတော့မယျ ။အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ၇ ယောကျမွောကျ ယောကျြားပါပဲ …..
မိန်းမတိုင်းဟာတစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ သူတို့ ယောက်ျားတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ စဉ်းစားဖူးတယ် တဲ့ …..ခင်ဗျားဟာ အိမ်ထောင်သည်ဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့မိန်းမကို မေးကြည့်ပါ ။
အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တော့ ခင်ဗျားကို သတ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ သူစဉ်းစားဖူးလိမ့်မယ်တဲ့ …..ကဲ .. ဒါဆို ဘာလို့ ခင်ဗျား အခုထိ အသက်ရှင်နေလဲ သိလား?
“ကလေး”ကလေးတစ်ယောက်လောက် ရလိုက်ရင်မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားကို ပိုပြီး သည်းခံလာနိုင်လာတယ်တဲ့ … ဒါကြောင့် ခင်ဗျား အခုချိန်အထိ အသက်ရှင်နေတာပေါ့ …..
ဆူဆန်နာ အန်နာမရင်း ဂျိုဟန်နာ ဆိုတဲ့သူဌေးမ တစ်ယောက် ယောက်ျား ၆ ယောက်ထိ ယူခဲ့တယ် အကုန်သေကုန်တယ် ။
တကယ်တော့ ဆူဆန်နာဟာသူ့ဘဝသက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး ထာဝရအချစ်ကို ရှာဖွေခဲ့တာပါ ၊ အရမ်းအထီးကျန်ခဲ့ရပါတယ် ။ သူ မွေးကင်းစအရွယ်မှာပဲ သူအမေ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ သူအရွယ်မရောက်ခင်မှာဘဲ သူ့အဖေ ထပ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။
သူ့အဖေက သူအတွက်တော့ အရာရာပါပဲ သူငယ်ချင်းလို.. အမေလို.. အဖေလို.. အစ်ကိုလို ဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ သူအဖေဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သူ့အဖေလို ယောက်ျားမျိုးကိုတွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။တကယ်တော့ ဆူဆန် ဘဝကမကောင်းတဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ပဲ ဆုံဖို့ ကံပါလာတယ် ထင်ပါတယ် ။
ဆူဆန်နာမှာ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိတယ်အဲဒိနှလုံးသားကြောင့်ပဲ လူ ၆ ယောက်ကို သေနေ့မစေ့ပဲ ကောင်းကင်ဘုံကို စောစောစီးစီး ပို့ပစ်လိုက်တယ်လေ ….ဆူဆန်ရဲ့ အလှက ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမယ့် သူ့ကို အရှိအတိုင်း လက်ခံနိုင်မယ့်သူမျိုး ….
သူ့ရဲ့ဒုစရိုက်တွေ သုစရိုက်တွေနဲ့ ဒီကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကို လက်ခံနိုင်မယ် လူမျိုးကို သူရွေးချယ်တော့မယ် ။အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ၇ ယောက်မြောက် ယောက်ျားပါပဲ …..